एकै पटक परिवारका २१ जना गु’माएर एक्लिनुको पीडा ! -
Home News एकै पटक परिवारका २१ जना गु’माएर एक्लिनुको पीडा !
दर्के झरीको आवाजले सोमबार बिहान साढे ३ बजे नरे पार्कीको निद्रा खुल्यो। उठेर बाहिर आउँदा घरवरिपरि खोला जत्रै पानीको भल बगिरहेको थियो। गाउँको पुछारमा बग्ने डिक्ली गाडखोला चर्को आवाजले गडगडाइरहेको थियो ।
बझाङको थलारा गाउँपालिका–४, डिक्ला गाउँको पूर्वी कुनामा बस्ने पार्की आत्तिए । उनको घरभन्दा करिब १ किलोमिटर माथि ढोगदिना डाँडामा गत वर्ष नै सानो पहिरो सुरु भएको थियो ।
करिब २० मिनेटसम्म गड्याङगुडुङ आवाज सहित पहिरो खसिरह्यो । ढुंगा ख’स्न रोकिएपछि कलक र नरे घर नजिक आए । नरेको घर केही भएको रहेन छ । जुन घर सुरक्षित भनेर केही बेर अगाडि परिवार छाडेर आएका थिए,
त्यो घर र वरिपरिका अरू ६ घरको नामोनिसान थिएन । उज्याले हुन्जेलसम्म आधा गाउँ नै बगर बनिसकेको थियो । कलकका परिवारका १८ र नरेका ५ गरी २३ जना बसेको घरलाई बीचमा पारेर १ किलोमिटर जति पहिरो फै’लिएको थियो ।
आमा, श्रीमती, चार छोराछोरी, भाइ, भाइबुहारी र भतिजाभतिजी गरी १७ जना परिवारका सदस्य गु’माएका कलक सार्कीको अवस्था झन् पी’डादायी छ ।
छिनछिनमा बेहो’स हुने उनका आँखा रुँदारुँदा राता भइसकेका छन् । ‘जे हुनु भइहाल्यो भनेर मन बुझा उने प्रयास गर्छु,’ उनले भने, ‘यस्तै देख्नका लागि म मात्रै किन बाँचे हुँला जस्तो लाग्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
Previous articleसमीक्षा पछि पल शाहले पनि लेखे फेसबुकमा यति लामाे स्पष्टीकरण
Next articleअनौठो घटना धनकुटामा : श्रीमानको मृ, त्युको खबर सुन्नासाथ श्रीमतीको पनि नि, धन